China 15v Dc Simba Rinowanisa China Manufacturers & Suppliers & Factory
15v Dc Simba Rinowanisa - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 24 Products for 15v Dc Simba Rinowanisa)
24v ac magetsi anopa dhodhi kunyorera: Izvi zvinhu 12V2A Ac DC Adapter idiki diki uye yakareruka muviri, zviri nyore kutakura kana uchifamba. Kubata zvakanyanya kunoreva kuti magetsi anokwanisa kushandira kwenguva yakareba, SCP, OLP, OVP, OCP inogona kuvimbisa kuchengeteka kwako, sarudzo yakakodzera yezvishongo zvako...
15V Dc Simba Rinowanisa 15W 1A
15V Dc Simba Rinopa 15W 1A: 15V Dc Simba Rinowanisa 15W 1A tsananguro: 15W Inochinjisa Simba Adapter Iine DC 5.5 2.1 chigadzirwa chemagetsi dhizavhari inoshanda kamera, nhare, aroma Diffuser, Aroma Humidifier etc.15W Power adapter zvigadzirwa ine UL, CE, RoHS, uye FCC yakasimbiswa. Isu tinongoshandisa zvikamu...
Misiyano uye hukama pakati pesimba adapt uye majaja
Misiyano pakati pemagetsi adapura uye majaja: Iyo adapta yemagetsi ndeyekushandura, inodzokorora uye voltage yemagetsi inoshandura, kuburitsa iri dc, mune yekusangana nemagetsi kunogona kunzwisiswa sekumanikidzwa kwakaderedzwa kwemagetsi magetsi, charger inowanzoreva kune inoshandura iripo ikozvino kune yakaderera....
Sei plug mune AC DC adapta? Fekitori yedu ine Inotengesa mamirioni echinhu ichi simba adapta zvigadzirwa zve LED mwenje, kubva kwatatanga-Imwe uye yega yega chigadzirwa iri UL, CE, RoHS, uye FCC Certified.Tinongoshandisa iwo epamusoro mhando dzemhando yepamusoro, Nyika dzese kutumira-Chigadzirwa chimwe nechimwe...
12V Washington DC
12V Washington DC 240V AC kusvika 12VDC 1 Amp Power adapter / plug pack ine 1.5m tambo yakagumiswa ine 2.1 DC plug. Inokodzera magetsi magetsi kune ako emagetsi zvigadzirwa senge modems, wachi, maprinta, mwenje ye LED, kamera dzekuchengetedza, nezvimwe. Switchchmode kana switching simba adapter iyo inopa...
Chii chinonzi AC vs DC Desktop Charger? 12V5A Desktop yeKuchinja magetsi magetsi anoshandiswa zvakasiyana. Kana yako yaimbova adapta isiri kushanda zvakanaka, unogona kunge uine izvi 460W 12V / 5A 5.5 * 2.5mm nhema seyakakwana kutsiva. Yakagadzirwa neyakakwira mhando uye mudunhu bhodhi, iyi adapta yakasimba uye...
Anochinjisa AC DC inoshanda sei?
Anochinjisa AC DC inoshanda sei? Muchidimbu, AC Adapter inoshandura magetsi emagetsi anogashirwa neiyo magetsi kuburitsa muchigadziko chinowanzove chakaderera chinoshandiswa nemagetsi chinogona kushandiswa. Mukati meiyo adapta yeA AC pane maviri mawaya waya anoturikidzana kutenderera simbi imwechete. Kushandiswa...
15v Dc Simba Rinowanisa 12v Dc Simba Rinowanisa 14v Simba Rinowanisa 48V Dc Simba Rinowanisa 9v Simba Rinowanisa AC-Dc Simba Rinowanisa 16W Simba Rinowanisa 12V 5A Simba Rinowanisa